3D na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo, ikpọ! | Gam akporosis
na oyi na akwụkwọ ahụ aja, makwaara aha ya na Bekee dị ka akwụkwọ ahụ aja, bụ onyonyo ndị ahụ anyị ga-ahụ ọtụtụ narị ugboro kwa ụbọchị. Maka nke ahụ, a na m emekarị kọmputa m na-agbanwe ha kwa elekere ma na ekwentị mkpanaka m jiri aka gbanwee ha obere oge. Anyị nwere ike iji ihe ọ bụla, dịka 3d na akwụkwọ ahụ aja, nke na-apụtaghị na ha na-ahapụ ihuenyo ahụ, kama na ha bụ atụmatụ ndị na-eme ka ha dị omimi.
Na ibe a ị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ dị oke mma, malite na otu gallery na ihe oyiyi na anyị chịkọtara ogologo oge gara aga wee kwụsị ọtụtụ weebụsaịtị ebe ị ga-ahụ atụmatụ ị masịrị gị. N'okpuru ị nwere gallery na ihe oyiyi m na-ekwu maka mbụ na ibe weebụ ebe ị ga-ahụkwu nhọrọ.
1 Galari nke 3D na akwụkwọ ahụ aja
2 Peeji ebe ịchọta 3D na akwụkwọ ahụ aja
2.1 HD akwụkwọ ahụ aja
2.2 Na ebe nrụọrụ weebụ niile
2.3 Na akwụkwọ ahụ aja FX
2.4 HD Akwụkwọ ahụaja ndabere
2.5 Na akwụkwọ ahụ aja
Galari nke 3D na akwụkwọ ahụ aja
Peeji ebe ịchọta 3D na akwụkwọ ahụ aja
HD akwụkwọ ahụ aja
HD na akwụkwọ ahụ aja bụ na ebe nrụọrụ weebụ anyị ga-ahụ ọtụtụ na akwụkwọ ahụ aja. N'ime ego nke weebụsaịtị a, nke a bụ ihe kpatara eji etinye ya na ndepụta a, enwere ngalaba nkịtị na 3D ndabere. Onwe m, ọ ga-amasị m ka echiche abụọ ahụ dị iche, mana hey, ọ bụkwa eziokwu na enwere ụfọdụ abstracts na-atọ ụtọ nke bara uru ịhụ.
Ihe kachasị amasị m na ebe nrụọrụ weebụ HD na akwụkwọ ahụ aja bụ na n'aka ekpe anyị nwere nhọrọ ịhọrọ otu anyị chọrọ ka ọ bụrụ usoro ihe oyiyi, ebe anyị nwere ike ịhọrọ nzụlite maka ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ na HD.
Njikọ na ndabere 3D hdwallpapers.in
Na ebe nrụọrụ weebụ niile
Ihe niile anyị kwuru banyere HD na akwụkwọ ahụ aja dị irè maka Wide na akwụkwọ ahụ aja. Ọfọn, enwere m ike ịnweghị nhọrọ dị otú ahụ (ọ bụ ezie na ọ bụ) ịbanye ma ọ bụ gaa ozugbo na ụdị onyonyo ụfọdụ, mana echere m katalọgụ nke weebụsaịtị nke abụọ a, ma ọ dịkarịa ala na usoro nke 3D, ọ bụ ezigbo mma a nke web nke m tinyere na mbu. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ uche m. Were anya na ị ga-ahụ.
Njikọ ọdịnaya 3D na akwụkwọ ahụ aja wide.com
Na akwụkwọ ahụ aja FX
Peeji nke emelitere ọtụtụ nwere ọtụtụ ọdịnaya, agbanyeghị na akwụsịla ngalaba a kemgbe oge ọkọchị, bụ Akwụkwọ ahụaja FX. Ha nwere otu ngalaba nwere otutu 3D, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ndị nọ ebe ahụ bụ naanị ezigbo onyonyo. N'ezie, ọbụlagodi ezigbo onyonyo ka emere ka ọ pụta na ihuenyo nke ngwaọrụ anyị. Na nkenke, weebụsaịtị ọzọ bara uru iburu n'uche ịchọta ego maka obere gam akporo anyị.
More akwụkwọ ahụ aja 3D na akwụkwọ ahụaja fx.com
HD Akwụkwọ ahụaja ndabere
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ọtụtụ onyonyo na ị nwedịrị ike ifu, ihe ị na-achọ ka akpọrọ HD Wallpaper Backgrounds. Ọ bụ ibe weebụ nwere ọtụtụ ngalaba ma onye ọ bụla n’ime ha na-enye anyị ọtụtụ ego. Nke a metụtakwara akwụkwọ ahụaja 3D, ebe, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ngalaba foto maka kọmputa, nzụlite HD, okirikiri ifuru, foto (nke ndị na-acha anụnụ anụnụ na nke ọbara ọbara) ma ọ bụ ụdị, ihe niile dị n'elu na 3D.
Ọ bụrụ n ’ị chere na anyị ejiri ibe ndị ahụ mechie anyị, ị hiere ụzọ. The nhọrọ mgbe na-afụ ụfụ na WallpaperStop bụ onye ọzọ na-enye anyị oyiyi kewara site na ngalaba Abstract, Digital Art, Fantasy, Fractal na Vector. Site na ngalaba ndị gara aga, ọkacha mmasị m bụ ọdịnaya na adịghị mma.
njikọ | na akwụkwọ ahụ aja
Ma ọ bụghị ihe niile ga-abụ peeji nke Bekee, nri? Anyị na-akwụsị na Fonditos, ibe weebụ n'asụsụ Spanish n'ime nke anyi nwekwara 3D dị iche iche kewara site na ngalaba, na nke a site na Animals, Landscapes, Characters, Robot, Vehicles na Ndị ọzọ.
N'ezie, m ga-enye ha obere ụra na nkwojiaka maka nhazi weebụ; Ọ masịrị m na a na-ahụ ihe oyiyi na-enweghị ịbanye ha.
Njikọ | www.fonditos.com